Osmangazi တံတားနှင့် Gebze İzmirကားလမ်းစတော့အိတ်များရောင်းရန် JPMorgan သို့အာဏာအပ်နှင်းခြင်း RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 KocaeliOsmangazi တံတားနှင့် Gebze İzmirကားလမ်းစတော့အိတ်ရောင်းအားအတွက် JPMorgan သို့အာဏာအပ်နှင်းခြင်း
16 / 02 / 2020 41 Kocaeli, အထွေထွေ, hyperlink များ, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ
osmangazi တံတားနှင့် gebze izmir အဝေးပြေးဝေစုကိုရောင်းချရန်အတွက် jpmorgana အခွင့်အာဏာ
Gebze-mirzmir အဝေးပြေးလမ်းမကြီးအားဖောက်လုပ်ခဲ့သည့် Otoyol YatırımAŞသည်မော်တော်ယာဉ်များဖွင့်လှစ်သည့်အချိန်တွင် Istanbul နှင့် Izmir အကြားခရီးစဉ်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျယ်တ ၀ င့်ဆွေးနွေးခဲ့သည့် Gebze-mirzmir အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ် JPMorgan အတွက်အတိုင်ပင်ခံအဖြစ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
တူရကီ, တံတားများ Osmangazi Gebze-Izmir အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနူးညံ့ Nurol ခုနှစ်တွင် 2009 ခုနှစ်ဧပြီလအပါအဝင်အကြီးဆုံးအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများအတွက်တÖzaltın, Makyol, Astaldi နှင့်ကုမ္ပဏီများ Gocay လုပ်ငန်းစုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ဒေါ်လာ ၇.၃ ဘီလီယံရှိပြီးစီမံကိန်းကိုချေးငွေဒေါ်လာ ၄.၉၆ ဘီလီယံ၊ အစုရှယ်ယာဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံနှင့်အသားတင်အစောပိုင်းလည်ပတ်မှုဒေါ်လာသန်း ၈၀၀ တို့ဖြင့်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
JPMorgan ၏ခွင့်ပြုချက်အရဝယ်ယူသူများ၊ စျေးနှုန်းနှင့်အကျိုးစီးပွားအပေါ် မူတည်၍ အစုရှယ်ယာမည်မျှရောင်းချမည်ဆိုပါက JPMorgan ၏ခွင့်ပြုချက်အရဝယ်သူများကိုအကဲဖြတ်လိမ့်မည်ဟုဘာသာရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးတိုက်ရိုက်သိရှိထားသည့်အရင်းအမြစ်တစ်ခုကဖော်ပြခဲ့သည်။
JPMorgan သည်ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သတ်၍ မည်သည့်မှတ်ချက်မျှမပေးခဲ့သော်လည်း Otoyol AŞသည်သတင်းရေးသားချိန်တွင်အဖြေမရခဲ့ပါ။
စီမံကိန်းတွင် ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာရှိသည့်အီတလီ Astaldi သည်အီတလီဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ကျဆင်းမှုကြောင့်အပြင်းအထန်ထိခိုက်ခံရခြင်းကြောင့် concordat အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေတွင်, တတိယတံတားရဲ့အဆုံးမှာအစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Astaldi ၏တူရကီအတွက်ရှေ့မှောက်တွင်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတူရကီမိတ်ဖက်အတွက် 19 ရာခိုင်နှုန်းရှယ်ယာရောင်းဖို့သဘောတူခဲ့သည်။
Otoyol Yatırım A.Ş. တွင် Nurol şnşaatနှင့်Özaltın၏ ၂၆.၉၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး Astaldi တွင် ၁၈.၈၆ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်Göçayသည် 26.98% ရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အစပိုင်းတွင် Gebze-mirzmir အဝေးပြေးလမ်းမကြီး၏တန်ဖိုးနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ၀ ယ်သူများကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်အတိုင်ပင်ခံများရွေးချယ်ခြင်းအားဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်အစပြုလုပ်ဆောင်ခြင်းများကိုကြေငြာခဲ့သည်။
YAVUZ SULTAN SELİMတံတားကိုတရုတ်ပြည်သို့ပို့ဆောင်သည်
ဒီဇင်ဘာလတွင်တရုတ်ကုမ္ပဏီခြောက်ခုကတည်ထောင်ခဲ့သောရန်ပုံငွေဖြင့်စာနယ်ဇင်းများတွင်ထင်ဟပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်တတိယမြောက် Bosphorus တံတားနှင့်မြောက်ပိုင်းမာမာရာကားလမ်း၏ ၅၁% ကိုဝယ်ယူလိမ့်မည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီများမှာ China Merchants Expressway၊ CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway နှင့် Anhui Expressway တို့ဖြစ်သည်။
Consortium အဖွဲ့ ၀ င်များသည်မိတ်ဖက်အတွက်ဒေါ်လာ ၆၈၈.၅ သန်းသုံးစွဲလိမ့်မည်။ စီမံကိန်းတွင်အကြီးဆုံးစီးပွားဖက်မှာ ၃၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် China Merchants Expressway ဖြစ်သည်။ ၂၀% ရှယ်ယာပါဝင်သော CMU၊ ၁၇.၅% နှင့် Zhejiang နှင့် Jiangsu အမြန်လမ်းမကြီး၊ စီချွမ်အမြန်လမ်းတွင် ၇% နှင့် Anhui အမြန်လမ်းတွင် ၇% ဖြင့်ရှိသည်။
Yavuz Sultan Selim တံတား၏အကျယ်မှာ ၃၂၂ မီတာရှိပြီး ၅၉ မီတာရှိသည်။ တံတားသည်အကျယ် ၁,၄၀၈ မီတာရှိပြီးအရှည်မှာ ၂,၀၀၀ ၁၆၄ မီတာဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျငွေမှာဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံဖြစ်သည်။ Yavuz Sultan Selim တံတားသည်တစ်နေ့လျှင်ကားဖြတ်သန်းမှု ၁၃၅၀၀၀ ရှိသည်။ (ရိုက်တာ)
Yavuz Sultan Selim တံတားဝေမျှမယ်အရောင်း၏ Setup ကိုဆွေးနွေးချက်
Mersin ၏ဆိပ်ကမ်းများတွင်ရှယ်ယာကြီးမားတဲ့အပြောင်းအရွှေ့! 40 ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံခြားသားများထံရောင်းချခဲ့သည်
'' Setup ကို '' အဘိတ်အတွက် Osmangazi တံတား
Siteler-Sıhhiyeကေဘယ်ကြိုးလိုင်းကိုဆောက်လုပ်ရန်အတွက် EGO သို့ Ankara Metropolitan Municipality …
Altepe Uludag ကမ္ဘာ့ဖလားကိုဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းဆို
Siteler-Sıhhiyeကေဘယ်ကြိုးလိုင်းကိုဆောက်လုပ်ရန်အတွက် Ankara မြို့ပြမြူနီစီပယ်…
Afyonkarahisar Karakuyu လိုင်းအပိုင်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းအချက်ပြခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း…
Antalya3။ ရရှိထားသည့်အဆိုပါအာဏာပိုင်တွေကအတွက်စင်မြင့်ရထားစနစ်
K သည် YTSO ခွင့်ပြုချက်တဖန် Give မှ
TÜVASAŞအတွက် Turk-Sen သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့
Otoyol ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Inc